एकाबिहानै सार्वजनिक यातायातमा लुटेरा समूह पसेपछि… – purnakhabar.com
मङ्सिर ७, काठमाडौं । बिहान छ बजे पाँचजनाको समूह महानगर यातायातमा यात्रुका रुपमा पस्छ। उनीहरुले रिङरोड रुटको बालाजुदेखि कलंकीसम्मको यात्रामा यात्रुलाई छानीछानी लुट्छन्।
यो खबर हामीले नागरिक न्युजबाट लिएका हौ । चालक, सहयोगी र यात्रुसमेत डरले प्रतिकार गर्ने या प्रहरीलाई खबर गर्नेभन्दा पनि चुपचाप रहन्छन्। बस गुडिरहन्छ, यात्रु चढिरहन्छन्, लुटेराहरु लुटिरहन्छन्। रिङरोडको सात किलोमिटर दूरीसम्म यो क्रम चलिरहन्छ।
राजधानीमा बुधबार बिहानै भएको घटनाका प्रत्यक्षदर्शी अरुगरुल हकका अनुसार पाँचजना युवाले उनका सामुन्ने एकजनाको मोबाइल र पैसा गाडीभित्र लुटेका थिए। ती व्यक्तिले प्रतिकार गर्न खोज्दा उल्टै घेरेर कुटपिट गरेका थिए।
सानेपास्थित नेसनल कलेजमा अध्ययनका लागि गइरहेका हकलाई लुटेरामध्येका एकजनाले आफूसँगैको सिटमा आउन भनेका थिए। उनी बस्नेबित्तिकै ती व्यक्तिले गोजी छाम्न थाले। उनले भने, ‘मेरो गोजीमा हात हाल्दा केही नभेटेपछि अन्य व्यक्तितर्फ बढे।’ बसमा यात्रुहरु कोही पनि बोल्ने अवस्थामा समेत नभएको हकले बताए।
लुटेराले एक यात्रुको मोबाइल झिकेपछि उनले चोरचोर भनी हल्ला गरे। त्यसपछि लुटेरा समूहकै व्यक्तिले उनलाई कुटपिट गरे। प्रत्यक्षदर्शी हकले भने, ‘मैले एकजना यात्रुलाई प्रहरीलाई खबर गरौं या प्रतिकार गरौं भन्दा उल्टो आक्रमणको प्रयास गरेपछि ओर्लिएर बचें।’ डरका कारण आफू अर्को गाडी चढेर कलेज आएको हकले बताए।
राजधानीमा चोरी र लुटपाटको घटना बढ्दै गर्दा बिहानै मुख्य सडकमा चल्ने सार्वजनिक यातायातमा भएको लुटपाटलाई गम्भीर रुपमा लिइएको छ। महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखाका प्रमुख धीरजप्रताप सिंहसँग घटनाबारे अनुसन्धान गरिने बताए। यसबारे औपचारिक उजुरी आइनसकेको उनले बताए। प्रहरी प्रवक्ता उत्तमराज सुवेदी पाँच वर्षअगाडि यस्तै समूह राजधानीमा सक्रिय रहँदा नियन्त्रणमा लिइएको बताउँछन्।
पछिल्लो घटनाबारे प्रहरी गम्भीर भएको भन्दै दोषीलाई तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताए। उनले भने, ‘दोषी खोजी कारबाही हुन्छ।’ महानगरीय यातायातले घटनाबारे कुनै जानकारी नआएको बताउँदै आफूहरुको नाममा अन्य यातायात पनि सञ्चालनमा रहेकाले अरु यातायातमा घटना भएको हुनसक्ने दाबी ग-यो।
प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार लुटेरा समूहका सदस्य २० देखि ३० वर्ष उमेर समूहका छन्। उनीहरु संगठितरुपमा लुट्ने उद्देश्यले गाडीमा आएको प्रत्यक्षदर्शीले बताए। उनीहरुले कतिजनालाई लुटे भन्ने यकिन भएको छैन।
मानवअधिकार कर्मी पद्मरत्न तुलाधरको निधन
कार्तिक १८, काठमाडौं । मानवअधिकार कर्मी पद्मरत्न तुलाधरको निधन भएको छ । उनको निधन नर्भिक अस्पतालमा आज दिनको १ बजे भएको छ । मानवअधिकारकर्मी तथा नागरिक अगुवा पद्मरत्न तुलाधरको ७७ वर्षको उमेरमा निधन भएको हो । थापाथलीस्थित नर्भिक अस्पतालमा उपचरका क्रममा तुलाधरको निधन भएको हो । बिरामी भएपछि उनी अन्नपूर्ण न्युरो अस्पतालमा उपचारका लागि भर्ना भएका थिए । […]
क्रान्तिकारी पत्रकार संगठनको बैठक सम्पन्न: संगठन बिरुद्द गतिविधि गर्ने कारबाहीमा परे
असोज ३, दाङ । नेकपा निकट क्रान्तिकारी पत्रकार संगठन नेपालको केन्द्रिय समिति बैठक मंगलबार दाङमा सम्पन भएको छ । प्रकाश डुम्रेको अध्यक्षतामा बसेको पहिलो बैठकले ५ बुँदे निर्णयहरु बिज्ञप्ति मार्फत सार्बजानिक गरेको छ । बैठकले देशभर प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र श्रमजीवि पत्रकार संगठनको पक्षमा अभियान चलाउने निर्णय गरेको छ । साथै बैठकले मातृ पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले […]
कत्तिक २, काठमाडौं । निजी हेलिकोप्टर सेवा प्रदायक कम्पनी सिम्रिक एयरले शुक्रबार अत्याधुनिक हेलिकोप्टर भित्र्याएको छ । ९एन एकेडी कल साइन रहेको एएस ३५० बीथ्रीई (एच १२५) हेलिकोप्टर शुक्रबार बिहान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण भएको हो। अत्याधुनिक प्रविधि जडित हेलिकोप्टर नेपाली हेलिकोप्टर उद्योगमा कोषेढुङ्गा सावित हुने विश्वास कम्पनीले लिएको छ । खोज तथा उद्दार, दृश्यावलोकन, […]
राजदूतमा सिफारिस व्यक्तिबारे गुनासो छ ? उजुरी गर्नुस्
मुटुको चाल गडबड भयो ? त्यसो भए यसो गरौं